Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah USAHello | USAHello
Your gaarka ah waa noo muhiim.
USAHello ixtiraamaya arimahaaga gaarka ah.
Si ay u muujiyaan naga go'an ilaalinta xuquuqda aad leedahay, waxaan abuuray Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this si ay u sharxaan sida aan ula dhaqmaan macluumaadka aad na siiso iyada oo isticmaalka website-kayaga. Nidaamkan waxaa la beddeli karaa wakhti kasta, taasoo Siyaasadda Privacy dib loo eegay codsan doonaa in macluumaadka aan helno ka dib taariikhda Siyaasadda Privacy dib loo eegay waxaa posted.
ogeysiis Khaaska ah Tani waxay shaaca dhaqamada gaarka ah ee usahello.org. ogeysiis Khaaska ah Tani waxay khusaysaa keliya macluumaadka laga soo ururiyey by website this. Waxaa kuu soo sheegi doonaa soo socda:
Waa maxay macluumaadka shaqsiga lagu garan karo waxaa loo ururiyaa aad ka internetka ee, sida loo isticmaalo iyo cidda waxaa laga yaabaa in lala wadaago.
Maxaa doorashooyin la heli karaa si aad u saabsan isticmaalka xogta aad.
nidaamka ammaanka meel si ay u ilaaliyaan si xun u isticmaalka macluumaadkaaga.
Sidee baad u sixi kartaa wax kasta oo qalad ah ee macluumaadka.
ururinta Information, isticmaalka, iyo wadaagista
Waxaan nahay milkiilayaasha kaliya ee xogta laga soo ururiyay on this site. Waxaan kaliya ay helaan / ururiyaan macluumaad ah in aad si iskood ah noo siiyaan via email ama la xiriir kale si toos ah aad ka. Waxaan iibin doonin ama kiro macluumaadkan qof.
Non-macluumaadka shaqsiga lagu garan iyo cookies
In la xidhiidha isticmaalka website-kayaga, waxaan mararka qaarkood u ururiyaan macluumaadka aan qofka lagu garan karo oo adiga kugu saabsan sida cinwaanka IP iyo bogagga web aad booqo. Waxaan sidoo kale laga yaabaa in aad computer diri "cookies". A "cookie" waa file qoraal yar soo diray si aad computer iyo ku kaydsan ay drive adag taas oo ka caawisa na aqoonsato martida ku celiyaan, fududeeyo helitaanka socda in booqde kasta iyo isticmaalka our site sida waxa luqadaha aad jeceshahay in aad ka akhrisan iyo bartaan, iyo dhaqanka isticmaalka track. Waxaan u isticmaali "cookies" iyo ururiyaan macluumaadka kale ee aan qofka lagu garan karo si kor loogu qaado waayo-aragnimo ee dhirta aad.
La Xiriirka iyo / ama ka jawaabidda codsiyada aad
Waxaan isticmaali doona Macluumaadkada si ay uga jawaabaan in aad, ku saabsan sababta aad nala soo xidhiidhay. Waxaan macluumaadkaaga la dhinac kasta oo saddexaad oo aan la wadaagi doontaa meel ka baxsan ururka, haddii loo baahdo si ay u gutaan codsigaaga, sida qorin kooras graduate ah.
Haddii aad na weydiiso in aan, waxaa laga yaabaa in aan kula soo xidhiidhi via email mustaqbalka in uu kuu sheego oo ku saabsan barnaamijyadeenna, fasalo, updates in ay dib u dejinta qaxootiga, iyo / ama updates in Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this.
Your helitaanka iyo gacan ku haynta macluumaadka
Waxaad dooran kartaa ka mid ah wax xiriir mustaqbalka naga waqti kasta. Waxaad samayn kartaa waxyaabaha soo socda waqti kasta oo nagala soo xiriiraya: privacy@usahello.org.
Eeg waxa xogta aan adiga kaa hayno, haddii ay jiraan.
Change / / tirtirto wixii macluumaad sax ah aan adiga kaa hayno.
Oo muujinaya welwel kasta oo aad qabto ku saabsan isticmaalka xogta aad.
Waxaan sameeyaan taxaddaro ay ku ilaaliyo macluumaadkaaga. Marka aad soo gudbiso macluumaadka xasaasiga ah internetka ee, macluumaadkaaga la ilaaliyo labada online iyo offline.
Meel kasta waxaan ururinaa macluumaad xasaasi ah (sida xogta credit card), macluumaadka waa la qurbayaa iyo kala qaado noo hab amaan ah. Waxaad ku cadeyn karo by raadinaya icon qufulka a in bar cinwaanka iyo raadinayso “https” bilowga ah ee cinwaanka bogga internetka.
Inkasta oo aan u isticmaalno encryption si ay u ilaaliyaan macluumaadka xasaasiga ah lagu kala qaado online, waxaan sidoo kale ilaaliyo offline macluumaadka. shaqaalaha u baahan tahay macluumaad oo keliya si ay u qabtaan shaqo gaar ah (tusaale ahaan, koorsooyinka baridda) lagu siiyo in ay helaan macluumaadka shaqsiga lagu garan.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama haddii ay dareemaan in aan aan ku waari by Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this, waa inaad isla markiiba nala soo xiriir via email ugu: privacy@usahello.org.